I-RFID wristband, imikhiqizo ye-NFC, Ikhadi le-PVC, ikhadi lensimbi - I-Chuangxinji Factory.
13.56mhz ISO14443A Ukulawula Ukufinyelela I-ABS RFID NFC ...
Ukuphrinta ngendlela oyifisayo Amakhadi esipho sokwethembeka ePlastiki ye-PVC
Ikhadi lePVC lePVC elenziwe ngokwezifiso-MIFARE Ultralig...
I-Mobile wireless IOS Android pos terminal nfc rf...
I-Microchip Tiny mini ku-NFC Isitika se-FPC NF...
Isitika se-RFID engenalutho kuthegi yensimbi ye-NFC
Isitika sangokwezifiso esiqinile se-PVC PET RFID ku-ntag2 yensimbi...
I-Security Ntag213 rfid patrol anti-metal coin to...
I-micro fpc ntag213 encane encane ku-metal mini dia10mm n...
Isungulwe ngonyaka ka-2001, i-Shenzhen Chuangxinji smart card co., Ltd yayikhethekile ekukhiqizeni
kanye nokumaketha kwekhadi le-PVC, ikhadi le-RFID, isongo se-NFC kanye ne-RFID Tag njll.
Iphethe ulayini wokukhiqiza wesithathu wesimanje nosezingeni eliphezulu:
Ulayini wokukhiqiza amakhadi e-PVC ophuma nyanga zonke wamakhadi wezingcezu ezingu-20,000,000: Imishini emisha ye-CTP emisha kanye nemishini yokunyathelisa ye-Heidelberg offset, imishini yokuhlanganisa engu-8.
Ulayini wokukhiqiza i-antenna ophuma nyanga zonke wamakhadi wezingcezu ezingu-20,000,000: imishini yokunyathelisa ukuze ugoqe, imishini yokuhlanganisa, imishini yokuguguleka nokuqopha.
Ulayini wokukhiqiza umkhiqizo wokugcina we-RFID ophuma nyanga zonke wamakhadi ahlakaniphile angu-500,000,000 kanye namathegi e-RFID angu-300,000,000: imishini yokuhlanganisa ehlehlisiwe ehlanganisa imishini yokusika ukufa, imishini yokulahla.
Sinezisebenzi zokumaketha eziyisi-6 ezikhuluma isiNgisi, iJalimane, iFrance, iSpanishi, isi-Arabhu nokunye, ibhizinisi lethu lisukela eYurophu, eMelika, e-Oceania, e-Afrika, e-Asia kanye namazwe asempumalanga ephakathi nezifunda.
Isixazululo se-RFID se-ear tag yezilwane
Ikesi lempumelelo yekhadi le-Metro RFID
I-Qatar Airlines plastic pvc Luggage Tag
Omaka abawashekayo be-RFID
Lezi ezinye izindaba zakamuva ezivela enkampanini yethu. Sizobuyekeza ezinye zezindaba zenkampani, izindatshana zemboni, nezindatshana ezihamba phambili kule mojuli ngezikhathi ezithile ... Siyajabula ukwabelana nawe ngalezi zigaba, sethemba ukuthi uyayithanda.
Kodwa-ke, isimo samanje sangempela sezindleko eziphezulu kanye nokusebenza kahle okuphansi kusixhumanisi se-warehouse, ngophenyo ...
Njengoba sonke sazi, ukusetshenziswa kwe-RFID embonini yezingubo sekwande kakhulu, futhi kungaletha im...
Ulwazi oluyisisekelo lwe-RFID
1. Iyini i-RFID? I-RFID isifinyezo se-Radio Frequency Identification, okungukuthi, ukuhlonza ifrikhwensi yomsakazo....
Umehluko nokuxhumana phakathi kwe-RFID esebenzayo kanye ne-passive
1. I-Definition Active rfid, eyaziwa nangokuthi i-rfid esebenzayo, amandla ayo okusebenza ahlinzekwa ngokuphelele yi-batt yangaphakathi...